juillet 2018 - Page 33 sur 91 -
Solontena maharitry ny Unicef : Nampirisika ny ezaka efa vitan’ny fitondram-panjakana
21/07/2018 admintriatra 0
Androany no handao an’i Madagasikara ny solontena maharitry ny Unicef monina eto Madagasikara, Elke Wisch rehefa niasa nandritra ny 4 taona teto. Fa mialohan’ ny niaingany, dia notolorana mari-boninahitra “officier de l’ordre national de Madagascar” …Tohiny
Fomban-drazana sakalava : Raikitra ihany ny « Fanompoambe 2018 »
Na teo aza ny olana samihafa, dia raikitra ihany ary hotanterahina manomboka ny alatsinainy izao ny « Fanompoambe 2018 » any amin’ny Doany Manongarivo any Mahajanga. Ny Fanompoambe izay fomban-drazana sakalava hikarakarana ny taolambalon’ireo Ampanjaka sy Mpimasy …Tohiny
Tambohobe 15 taona : Mitaky sehatra ho azy ny mpanao vakisôva
Mpanao gazety an-kira. Vakodrazana iray fantatra amin’ny votoatin’ny tononkira ravahan’ny tehaka ny vakisôva. Tsy dia mahazo laka loatra anefa io kolontsaina iray io, noho ireo mpiangaly azy tsy mitsitsy fitenenana fa mila amin’ny fomba mahitsy …Tohiny
« Vazo sy Mozika » : Hifampidera talenta etsy Antsahamanitra i Lôla sy Njakatiana
Samy manana ny hanitra ho azy, nefa ampiraisin’ny « Vazo sy mozika » amin’ny sehatra iray. Hifampidera talenta etsy Antsahamanitra i Lôla sy Njakatiana ao anatin’ilay seho iarahan’izy ireo rahampitso tolakandro manomboka amin’ny 3 ora sy fahefany. …Tohiny
« 1 … 31 32 33 34 35 … 91 »
Tonga atsy amin’ny biraon’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana, omaly faha- 05 oktobra 2018, tamin’ny 2 ora sy 50 minitra hariva, ny andiany voalohany amin’ireo taratasin-datsa-bato tokana, hampiasaina amin’ny fifidianana fihodinana voalohany. Biletà tokana ...Tohiny